Sawirro: Halkee marayaa cadaadiska ay B/Caalamka ee madax goboleedyada? - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Halkee marayaa cadaadiska ay B/Caalamka ee madax goboleedyada?
Sawirro: Halkee marayaa cadaadiska ay B/Caalamka ee madax goboleedyada?
Muqdisho (Caasimada Online) – Beesha caalamka ayaa weli wadda dadaallo xal loogu helayo muranka ka taagan doorashada Soomaaliya, ayada oo safiirada dalalka reer galbeedka ay si gaar gaar ah ula kulmayaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka.
Safiirka Dowlada Sweden u fadhiya dalka Soomaaliya, Amb. Staffing Tillander ayaa maanta magaalada Muqdisho kulan kula yeelatay Madaxweynaha maamulka HirShabeelle, Cali Guudlaawe.
Kulankan ayaa waxaa diiradda lagu saaray xiisada doorashada dalka, oo ay ku muransan yihiin dowladda iyo mucaaridka oo iyagu qaadacay guddiga doorashada oo bilaabay qabashada doorasho hal dhinac ah oo aysan u dhameyn saamileyda siyaasada.
Kulankan ayaa qeyb ka ah kulamo maalmahan socday oo madaxda dowlad goboleeedyada ay la yeelanayeen wakiilada caalamka ayada oo lagu cadaadinayo inay heshiis buuxa ka galaan muranka ka taagan doorashada dalka.
Cali Guudlaawe oo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Muqdisho, ayaa kulamo kala duwan la qaadanayay beesha caalamka, kuwaasi oo la xiriirka xiisadii ka dhalatay doorashada maamulkaas iyo mashaariicda horumarineed ee HirShabeelle.
Kulanka Guudlaawe iyo danjire Staffing Tillander ayaa sidoo kale looga hadlay xiisada maamulka HirShabeelle, xal u helida fatahaadaha sida; dayactirka Biyo xireenka, dib u heshiinta, hirgelinta mashaariicda muhiimka ee maamulkaas.
Labada mas’uul ayaa isla qaatay muhiimada ay leedahay ka hortaga fatahaada wabiga Shabeelle oo sanad walba ku fataha deegaano badan oo maamulkaas, midaasi oo saameyn xoogan ku yeesha dadka deegaankaas.
Deegaano badan oo ka tirsan maamulka HirShabeelle ayaa waxa saameyn dhibaato xoogan ku haya fatahaadaha wabiga HirShabeelle oo sanad walba fatahaad hor leh ka sameeya deeganada, waana arrinta u weyn ee uu Guudlaawe kala hadlo saaxiibada caalamka.